I-Lenovo Yazisa ngeLebeng yayo eNtsha yeLebeng Brand ngokusemthethweni | I-Androidsis
Iselfowuni yeLemeng: Ibhanti eNtsha kaLenovo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iVivo ibhengeze eyayo entsha engaphantsi kwegama IQOO. Kuncinci kudlulile de uphawu olutsha kwi-Android lubhengeze uphawu lwalo olutsha. Kule meko, yiLenovo ebhengeza uphawu lwayo olutsha. Imalunga neLemeng Mobile, ebhengezwe ngokusesikweni. Olu hlobo lutsha lomenzi luza kugxila kwizixhobo zemultimedia, njengoko itshilo inkampani kwinqaku lokwazisa eliqinisekisa ubukho bayo.
Njengoko sele uyazi, ILenovo ikwangumnini weMotorola. Ke Lemeng Iselfowuni iba luphawu lwesithathu lomenzi waseTshayina. Nangona olu hlobo luza kujolisa kwicandelo elithile lentengiso. Njengoko kubonisiwe ukuza kuthi ga ngoku.
Nangona kule ngqiqo, iMotorola iphathwe ngalo lonke ixesha njengophawu oluzimeleyo. Asazi ukuba isicwangciso esinye siya kulandelwa kunye neLemeng Mobile. Inyani yile ayisiyonto intsha, kodwa sele kuyiminyaka emininzi ingasetyenziswa. Ukusukela ngaphambili, iimodeli ezikolu luhlu zijolise kwisandi nakumculo.
Ke ngoko, kucacisiwe ukuba iLenovo iyakusigcina esi sicwangciso kunye neLemeng Mobile kwaye isungule iimodeli ezijolise kwisandi okanye kwimultimedia kuyo. Ngelixa le yinto ayikaqinisekiswa okwangoku ngokusemthethweni. Ewe kunjalo, inokuba yinto yokubheja enomdla kwaye inokuba niche kwimarike.
Umbono kukuba olu hlobo lutsha iya kwahlulahlula kuluhlu oluphambili lweLenovo. Oko kuhlala kungumbono kunye neebhendi zesekondari. Okwangoku asazi nto malunga nokuba ii-smartphones zokuqala zeLemeng ziya kufika nini ezivenkileni. Ngamanye amaxesha kulo nyaka kufanelekile.
Siza kujonga izicwangciso zikaLenovo Ngale brand. Sibona ukuba zingaphi iimveliso kwi-Android ezenza uphawu lwesibini. Ke ngekhe kumangalise ukuba entsha iza kubhengezwa kungekudala. Ucinga ukuba uLemeng Mobile uza kuphehlelela ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iselfowuni yeLemeng: Ibhanti eNtsha kaLenovo
Ukuvalwa kwe5G: IHuawei ipapasha icandelo le-Q & A kwiwebhusayithi yayo ukuze iphinde ibenokuzithemba
I-Energizer Power Max P18K Pop: I-smartphone ene-18.000 mAh ibhetri